How ndinobvisa ari Orchid kumba? kurayira
kazhinji dzakawanda mune dzimba nemafurati dzinogona kuwanikwa rwezasi runako - Orchid. Vazhinji vanodavira kuti zvakaoma chaizvo kwaari kutarisira, asi chaizvoizvo kusika izvozvo zvakakodzera mamiriro kuti kukura uye kutumbuka izvo zvakaoma. Zvisinei, beginners Senda nani vasarudze vakawanda vane mwero fomu - phalaenopsis. The chikuru ndechokuti kupa iye aine zvakakwana yakawanda chiedza, regai kudurura mvura uye kudzivirira kubva drafts.
Asi zviri zvakafanana zvakakosha kuziva sei ndinobvisa kuti Orchid kumba. Vakawanda vanosarudza kuita izvi nokukurumidza iwe kuuya kumba ruva chirimwa, asi kuita izvozvo kufanira. Isa izvi kuitwa kusvikira nguva yakadai chirimwa haisi chose ichatungira. Zvadaro kucheka pemashanga uye munobuda inotevera zvinhu makange akatsanangura zvose, sei ndinobvisa kuti Orchid pashure maruva.
Danho rokutanga kusarudza zvakarurama poto. Chero zvazvingava zviri kutora zvikuru nevanhu tine nevhu kana mupurasitiki opaque mikana hazviiti! chirimwa ichi zvinoda kuwana chiedza kumidzi, saka zvakakosha kuziva kupi ndinobvisa yacho orchid. Unofanira chete vanofanira kusarudza mapurasitiki kana girazi hari, zviri chinodiwa kumisa pamusoro zvizere yakajeka kana zvakajeka shanduro, sezvo masvingo rima kuipa uchisuwa chezuva. Panguva iyoyowo kuteerera kana pane nechepasi makomba abudise. Pasina kwavari, mvura havagoni wopedza uye nemidzi richaora.
Kana uchida kuziva zvose zviri sei ndinobvisa mashoko Orchid kumba, yeuka kuti vakawanda vavo. Bhadharai vainyatsotarisirwa chinofanira pasi. Epiphytes kuti hakukodzeri zvatinosiita muvhu, saka zviri nani kuti iye kutenga musanganiswa chaiyo ine nemakwati uye peat Moss.
Pamberi pakutanga nokuisazve kwacho kwazvo dira Orchid vakarwira mvura, nemhaka midzi nyore ndiparadzaniswe masvingo muhari. Gadzirira zvose unofanira pachine: muhari itsva uye ivhu, abudise (rakanakira ichi chinangwa rakawedzerwa ivhu), banga rakapinza kana chigero, zviri chinodiwa kugadzirira kunyange rodzvurwa nemarasha.
Kudhonza ruva kubva achembera hari, bvisa vakasara substrate. Unogona kugeza midzi pamwe anodziya mvura. Asi iwe unogona kusiya mugove diki hwekare ivhu. vachengeti Vazhinji vanoti kuchabatsira Orchid kuchinja nokukurumidza kune kwemawakaridyara itsva. Asati kumhara, ongorora midzi, bvisa zvose negomba zvidimbu vanofanira kubviswa uye akapfava kuorera mazviri kuti kumidzi. All aumba somugumisiro vanga kurapwa ugodira yakagadzirirwa marasha upfu. Izvi zvinokosha ezvinhu nokuti wakasimwa orkideat mumba zvakanaka. Ko kurasikirwa danho iri. Pashure pezvose, kurapwa ichi anobvumira kuti disinfect unocheka midzi rakasiyana-siyana spoilage noutachiona. Zvadaro nokungwarira isa epiphyte yako muhari itsva, nenzira, zvinofanira kuva zvishoma kupfuura yapfuura. Tora chenjerera kukurukurwa, chenjerera kutsikirira kana kuvhuna midzi ruva.
Kana uchiziva kuti ndinobvisa kuti Orchid kumba, ipapo kutanga ichi muitiro hakuzoitiki kutyisa. Chinhu chikuru - musaedza kutadzirwa ipapo uchava mukana mukuru kuti pashure nzira iyi, zviri nokukurumidza achakupai nechiredzo mutsva.
Tulips: kudyara kuwa. Tips noruzivo webindu
Mhando dzakasiyana-siyana lettuce: zvakasiyana-siyana uye tsananguro
Hove munyika. Hove dziva nemaoko ake
Honeysuckle Berel: Kunyanya kurimwa, tsanangudzo dzakasiyana-siyana, photo, wongororo
Nei usingagoni kunwa doro pamwe nemishonga uye chii vanotyisidzira asiri zvaidiwa nokutonga ichi?
Zuva remitambo. Mhemberero
Simple muviri kubvisa dumbu mafuta.
Calendula tincture - ane mushonga kuti bvudzi.
Cooking rinonaka keke uye kufara: yokuwana nayo "yakaora chigutsa"
Andrei Zyuzin - kudzidza kirabhu "Salavat Yulaev"
IPad A1455: unhu, matambudziko zvinobvira, kugadziriswa
Kulebyaka zvinonaka hove. Recipes pai pamwe howa, huku kana nyama
Zvisikwa chikepe cheIso, ichiwa murudo pachavo pakutanga pakuona
Zolochiv Castle: tsananguro, mapikicha, nhoroondo, sei kuti
Oleg Kostarev: Biography uye pikicha
Raisa. Name ukoshi nokuti varidzi vahwo